Sandan’ny Ariary Natotongan’ny HVM
Eric Rabeharisoa “Mila mitady lalan-kafa hanavotana ny toekarena isika”
Sady mampalahelo no tsy manome traikefa ny zava-misy maneran-tany ankehitriny, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika, Leader Fanilo, tarihin’ny filohany Jean Max Rakotomamonjy, Eric Rabeharisoa.
Fanohanana ny toekarem-pirenena Frantsay Hanokanana tetibola 15 miliara euros isam-bolana
Taorian` ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay nanambara fa miverina mihiboka i Frantsa manomboka anio, dia ny praiminisitra Jean Castex no nitondra ireo teboka ho tsara ho fantatra amin` ny fiatrehana ny valanaretina Covid 19.
Taom-piotazana lodsia 4-13 novambra no fandraisana fangatahan’ny mpanangom-bokatra
Ho avy ny lodsia na tsy mbola namoaka daty ofisialy hisokafan’ny taom-piotazana aza ireo Faritra tena mamokatra ity voankazo ity.
Tsy mitsaha-mitotongana ny Ariary hatramin'ny niakaran’i Hery Rajaonarimampianina teo amin’ny fitondrana tamin’ny 25 janoary 2014.
Miteny ho azy ny tarehimarika : 3 812,29 Ariary ny 1 Euro ary 3 236,91 Ariary ny 1 dolara amin’izao, raha 3 087,45 Ariary sy 2 279,93 Ariary izany ny andro voalohany nanaovan’i Hery Rajaonarimampianina fianianana teo Mahamasina ka nandraisany fahefana feno. 3 171,74 Ariary ny Euro ary 2 582,57 Ariary ny dolara afaka 12 volana nitondrana izy. Efa-taona aty aoriana 3 812,29 Ariary ny 1 Euro ary 3 236,91 Ariary ny 1 dolara. Etsy an-kilany, mitombo ny fanambarana vokatry ny fitrandrahana volamena. Mananika ny telo taonina ho an’ity taona 2017. Ireharehan’ity fitondrana HVM ity izany vokatra izany. Efa trandrahana ny solika ao Tsimiroro na mbola menaka mavesatra aza no mivoaka ao, saingy migoka izany ve isika ? Niaka-bidy ny lavanila Malagasy. Tafakatra fito tapitrisa Ariary ny kilao. Tsara ny tsena ho an’ny jirofo na tany Analanjirofo ka hatrany Vatovavy Fitovinany. Gaga anefa ny Malagasy fa tsy mitsahatra mitotongana ny sandan’ny Ariary. Tsy izao ihany io, fa hatramin’ny nahatongavan’i Hery Rajaonarimampianina teo amin’ny fitondrana. Namoaka vola vaovao mihitsy tamin’ity 2017 ity, niditra an-tsehatra tamin’ny roa alina Ariary, angamba mba hanakonana ny fahavoazana. Fa toa vao mainka mihazakazaka ny fitotongan’ny Ariary. Fa inona no mitranga ? Ity fitondrana ity anefa mirehareha amin’ny fahaiza-mitantana, ny fanjakana tsara tantana, ny mangarahara.